सुदूरपश्चिममा भिटौलाको रौनक शुरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
सुदूरपश्चिममा भिटौलाको रौनक शुरु !!
बैतडी सहित सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरुमा भिटौलाको रौनक शुरु भएको छ । यो क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरुमा चैतको महिना विवाहित छोरीबेटीहरुलाई माइतीले भेट्ने चलन रही आएको छ । विवाहित दीदीबहिनीहरुलाई दाजुभाईले कोसेली सहित भेट्ने चलन रही आएको छ ।
माइती पक्षका तर्फबाट कोसेलीसहित दिदि बहिनीहरुको घरमा पुग्ने चलन रहेको दशरथचन्द नगरपालिका–२ की पार्वती बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘ चैतको महिना हरेक बर्ष विवाहित छोरीबेटीहरुलाई भेट्ने चलन रही आएको छ । माइती पक्षले यो महिना भेटघाट गर्दा खुसी लाग्ने गरेको छ ।’
परापूर्वकालदेखि नै यो क्षेत्रमा चैतको महिना माइती पक्षले छोरी बहिनीहरुलाई भेटघाट गर्ने चलन रही आएको स्थानीय संस्कृतिका जानकार गणेशदत्त अवस्थीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘पहिला पहिला सञ्चारका साधनहरु पनि थिएनन्। सानै उमेरमा बिहे गरिदिने चलन थियो। माइती पक्षको छोरी बहिनीहरुलाई नियास्रो पनि लाग्ने गरेको थियो। त्यसैले माइती पक्षले कोसेलीसहित भेटघाट गर्ने चलन चलेको हो। यो चलन अहिले पनि छ ।’
चैतको महिनाको शुरुदेखि महिनाभरी विवाहित छोरीचेलीहरुलाई भेट्ने चलन रही आएको दशरथचन्द नगरपालिका १ का मञ्जु भट्टले जानकारी दिनुभयो । यो महिनाको भेटघाटले माइतीको नियास्रो मेटिने गरेको उहाँले बताउनुभयो । माइती पक्षले मिठामिठा परिकार सहित छोरी बैनीहरुलाई भेट्ने चलन रही आएको छ । (भगीरथ अवस्थीले ninglashainionline मा लेखेका छन्)